အဆိုပါဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်၏နက်နဲသောအရာကောင်းစွာဖြေရှင်းစေခြင်းငှါ - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment "ဟုအဆိုပါဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်၏နက်နဲသောအရာကောင်းစွာဖြေရှင်းစေခြင်းငှါ - BGR
အဆိုပါဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်၏နက်နဲသောအရာကောင်းစွာဖြေရှင်းစေခြင်းငှါ - BGR
Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ ယခုနီးပါးငါးလထွက်သည်ဖြစ်ပေမယ့်ကျနော်တို့ကယခုနှစ်အကြီးမားဆုံးရုပ်ရှင်အသစ်သောအရာတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဆက်လက်ထားပါတယ် - ကြောင်း နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် Blu-ray player အတွက်ပြီးသားရရှိနိုင်ပါသည်။ ray ကို formats လည်းယနေ့အထိအရှိဆုံးမော်ကွန်းအံ့ဩခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အသစ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်စတူဒီယိုသေးအပေါငျးတို့သနက်နဲသောအရာကရှင်းပြခဲ့သည်မရှိသေးပေ နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ သူကပရိသတ်များအရှုပ်ထွေးနိုင်ကြောင်းများစွာသောအမှုအရာ addressing အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေမယ့်။ မေးခွန်းတစ်ခုနေဆဲရှင်းပြရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါကဘယ်မှာစတိဗ်ရော်ဂျာရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လပေါင်းများစွာအဲဒီမှာအဖြေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်တည်ဆောက် ကျနော်တို့ကဖြစ်နိုင်ခြေတစ်နှစ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်သည့်အခါ စတိဗ်အိမ်မှာ Peggy Carter ကပြန်ရောက်ပေမယ့်တစ်ဦးပန်ကာယခုအခါ ပို. ပင်သတင်းအချက်အလက်များကိုတစ်ဦးအပိုအားထုတ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
အချိန် ကျနော်တို့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ် ရဲ့အဆုံးမှာဒီတစ်ခုကခုန်အံ့ဩခြင်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေး နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ နဲ့ Steve 1946 အတွက်တစ်ချိန်ချိန်တံခါးကို Peggy အပေါ်ခေါက်ခဲ့ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ပြီးတာနဲ့ရှိ, မိမိအသက်တာ၏မေတ္တာလက်ထပ်ဖို့တည်းခိုသူတို့လိုချင်ကြလိမ့်မယ်အဖြစ်သူတို့အတူတကွဟောင်းစိုက်ပျိုးကြသည်။ စတိဗ်သူ့ကိုသူအမြဲလိုချင်ခဲ့တဲ့ဘဝအသက်ရှင်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာဇာတ်လမ်းဖန်တီးထားသည်။
ဤ "Reddit အသုံးပြုသူမှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏ thanksredditformemes "သူကားအဘယ်သူတစ်ဦးမကြာသေးမီကဗီဒီယိုကိုအသုံးပြု က Wired ။ ] စတိဗ်ကဒီကခုန်လုပ်ဖို့အတိတ်ကာလကိုပြန်ကြွတော်မူသောအခါထိုနှစ်တွင်တွက်ချက်ရန်။
အထက်ပါဗီဒီယိုမှာ, အထူးသက်ရောက်မှုအသင်းသူစွန်ငှက်အသစ်တစ်ခုကိုဒိုင်းလွှားကိုအပ်နဲ့အသစ်ကဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်စေရန် 106 မှပြန်လာသောအခါ, ဖြစ်ခဲ့သည်ဟောင်းကိပ် 2023 နှစ်ပေါင်း said:
ဦးထုပ် 1920 မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူက (1945 နှစ်) ရေခဲ 25 ထဲသို့ဝင်
သူ 2011 တှငျတှေ့နှင့် 2023 သည်အထိအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ (12 နှစ်)
ဤသည် 37 နှစ်ပေါင်းကိပ် (ထိုကျောက်များချခင်) စေသည်
ဒါဟာ Peggy နှင့်အတူ 69 နှစ်ပေါင်းသွားသည်ကိုဆိုလိုသည်။ (106 - 37)
1947 နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ပွဲ၏အဆုံးပြီးနောက်သူတနည်း2သည်အထိအသက်ရှင်နေထိုင်လိုသူ 2016 အတွက် Peggy မှပြန်လာသောယူဆ။ (2016 - 1947 69 =) ။
အဆိုပါ 2016 တစ်နှစ် (ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်၌) Peggy ၏အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်မအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Peggy အတူနေဖို့၏ထံမှမတူညီသောအချိန်ဇယားကိုဖန်တီးပေးမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါသည် နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ ။ အံ့ဩခြင်းဒီ MCU ယခုသေနတ်စတိဗ်၏အချိန်ခရီးသွားဘို့လက်ျာအနက်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဗားရှင်း, သင်တန်း, စတိဗ်ရှိသည်ဖို့ပါလိမ့်မယ်ဒီစကြဝဠာမှာ Peggy လက်ထပ်, ထိုသို့များ၏ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးသီအိုရီဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ မွေးစားပါပြီ။ ဒါပေမယ့်အဖြစ် အဆိုပါ Russo ညီအစ်ကိုတွေကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှင်းပြခဲ့ကြပါပြီ ဒီ MCU အတွက် running အချိန်ခရီးသွားပေးထားဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
စတိဗ်မူရင်းအချိန်ဇယားဖို့ဒိုင်းလွှားကိုပြန်သွားဖို့ဤသူအပေါင်းတို့အနှစ်ငံ့လင့်လျက်အဘယ်ကြောင့်ဟုဆိုသည်ကျနော်တို့နေဆဲမသိရပါဘူး။ ဟုတ်တယ်, သူကပိုပြီးဆုံးရှုံးမယ်လို့သေချာစေရန်အချိန်ပြန်ခရီးသွားလာမတိုင်မီ Peggy ရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြပေမည်။ ဒါပေမယ့်သူဘယ်လိုသူသည်ဤရှည်လျားရှင်သန်မယ်လို့သိထားသလဲ
Image ကိုရင်းမြစ်: အံ့ဩခြင်းစတူဒီယို
မိမိအပြိုင်ဘက်မော်ကွန်း "Thrones ၏ဂိမ်း" ၏လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ Netflix ဟာကောင်းစွာ filtered ခဲ့ကြပေမည် - BGR
ဂျေဆန် Momoa ပုံကသူ့အစီအစဉ်ကို Apple ကတီဗီ + "ကိုကြည့်ပါ" "Thrones ၏ဂိမ်း" ထက် သာ. ကောင်း၏ထင် - BGR
PSG အသင်း - ရီးရဲလ်။ ဇီဒန်း: "ကျနော်တို့ကပိုကောင်းတဲ့လုပျနိုငျနှင့်ကျွန်တော်ပိုကောင်းပြုလိမ့်မည်" - ဗွီဒီယို